ပလကျ​ဝ NLD အမတျ​ နှငျ့ ​အေ​အေ အကွား ဇာတျ​လမျး – Kyaw Zaw Oo's Blog
November 8, 2019 January 24, 2020 web_master
​ပလကျ​ဝ NLD အမတျ​ နှငျ့ ​အေ​အေ အကွား ဇာတျ​လမျး
​ပလက်​ဝ NLD အမတ်​ နှင့်​ ​အေ​အေ အကြား ဇာတ်​လမ်း
မ​နေ့က ​စောင့်​ဖတ်​​နေတဲ့ သတင်း​တွေထဲမှာ ချင်းပြည်​နယ်​ဘက်​က သတင်းတစ်​ပုဒ်​ကို ဖတ်​ရပါတယ်​။
ထိန်းသိမ်းခံ ပလက်​ဝ NLD အမတ်​အတွက်​ ချင်း ဘာသာ​ရေး အဖွဲ့အစည်း​တွေက KIA ဆီ ​ပေါက်​နိုင်​မယ့်​ ခရစ်​ယန်​ သာသနာ​ရေး လမ်း​ကြောင်းက​နေ စာ​ရေးကြမယ်​ တဲ့၊ စာ​အ​ချော​ရေးထားပြီးပြီတဲ့။
ဟာ . . . ဒီလူ​တွေအ​ပြောင်းအလဲမြန်​လှချည်​လား​ပေါ့​လေ၊ ကျွန်​​တော်​​တွေးမိပါတယ်​။ ဘာ​ကြောင့်​ ဒီလို​တွေးမိသလဲ ဆို​တော့ အထိန်း​သိမ်းခံ ဦး​ဝှေးတင်း အပါအဝင်​ ဒီလူ​တွေဟာ လွန်​ခဲ့တဲ့ သုံးနှစ်​​ကျော်​က ကျွန်​​တော်​တို့ကို ​အေ​အေလက်​က​​နေ ကယ်​ကြပါ ကယ်​ကြပါ ဆိုပြီး ဗိုလ်​ချုပ်​မှူးကြီးမင်း​အောင်​လှိုင်​ နဲ့ ပြည်​ထဲ​ရေးဝန်​ကြီးဌာန တို့ဆီကို စာလှမ်း​ရေးထားကြတာမို့လိုပါပဲ။ ဒီအလုပ်​​တွေကို ခမီးလူငယ်​​ခေါင်း​ဆောင်​ ​ဝှေးတင်း (Huay Ting – လက်​ရှိ အထိန်းသိမ်းခံ​နေရသူ NLD အမတ်​) ကိုယ်​တိုင်​ ဦး​ဆောင်​ပြီး လုပ်​​နေခဲ့ကြတာ ဖြစ်​ပါတယ်​။
ဒီအ​ကြောင်းကို MID News (Media Initiatives for Democracy) သတင်းစာမျက်​နှာမှာ ၂၀၁၆ ဇန်နဝါရီလ (၁၉) ရက်​​နေ့က ​ရေးထားတဲ့ သတင်းတစ်​ပုဒ်​မှာ ဒီလို ​ဖော်​ပြထားပါတယ်​။ “. . . (၂၀၁၆) ဇန်နဝါရီ ၇ ရက်နေ့တွင် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ထံ တင်ပြထားပြီး၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရခိုင်ဝန်ကြီးချုပ်၊ ချင်းဝန်ကြီးချုပ်တို့ထံ တင်ပြထားကြောင်း ခူမီးလူငယ်များအသင်းအတွင်းရေးမှူး ဝှေ့တင်းက ပြောသည်။”
အဲသည်​တုန်းက ခူမီးလူငယ်​အဖွဲ့တို့ စသည့်​ဖြင့်​ ပူးတွဲထုတ်​ပြန်​ကြတဲ့ ထုတ်​ပြန်​ချက်​မှာ အချက်​​လေးငါး​ခြောက်​ချက်​ပါရာမှာ အလွယ်​မှတ်​မိသ​လောက်​ – အစိုးရ နဲ့ တပ်​မ​တော်​ကို ​ကျေးဇူးတင်​တယ်​၊ NCA သ​ဘောတူညီချက်​​တွေအရ ပလက်​ဝအပါအဝင်​ ချင်းပြည်​နယ်​မှာ အစိုးရတပ်​ နဲ့ CNF ပူးတွဲ လုံခြုံ​ရေး​ဆောင်​ရွက်​ဖို့ (ဆိုလိုတာ ​အေ​အေ ကို ပလက်​ဝမှာ မရှိ​စေဖို့)၊ ​ပလက်​ဝမြို့နယ်​အတွင်း ​အေ​အေရဲ့ ​ပြောဆိုစည်းရုံး​နေမှု​တွေကို ကန့်​ကွက်​တယ်​ စသည်​ဖြင့်​ ပါ,ပါတယ်​။
ဦး​ဝှေ့တင်းဟာ ​ခူမီး နဲ့ ရခိုင်​​တွေအကြား ​သွေးခွဲတဲ့ လှုံ့​ဆော်​​ရေးသားချက်​​တွေကို ​ရေးတဲ့ ​ဖေ့ဘုတ်​ စာမျက်​နှာ အချို့မှာ admin အဖြစ်​ပါဝင်​​နေတယ်​ လို့ ကျွန်​​တော့်​ကို ​ပြော​ပြော​နေကြတာ ကြားဖူးတယ်​။ ဒါ​ပေမဲ့ ဒီအချက်​ကို သက်​​သေ သာဓက ခိုင်​လုံမှုမရှိဘူး လို့ပဲ သ​ဘောထား လိုက်​လို့ရပါတယ်​။
တကယ်​လို့များ ကချင်​ပြည်​နယ်​ထဲက မိတ်​​ဆွေများဆီကို လူကြီးမင်းတို့တ​တွေ စာလှမ်း​ရေးတဲ့အခါ ဖတ်​ရှုရသူ​တွေ သိချင်​စိတ်​​ပေါက်​တဲ့ ​မေးခွန်း​လေး​တွေ ​ပေါ်​ပေါက်​လာနိုင်​တာမို့ တချို့​မေးခွန်း​လေး​တွေကို ​ဖြေဆိုနိုင်​ဖို့ရာ စာလှမ်း​ရေးတဲ့သူ​တွေက ကြိုတင်​ ပြင်​ဆင်​ထားသင့်​တယ်​။
(က) ရခိုင်​​တွေ​နေတဲ့ ပလက်​ဝမှာ ​အေ​အေ မ​နေရဘူး ဆိုရင်​၊ ​ကေအိုင်​​အေဟာ ကချင်​​တွေရှိ​နေတဲ့ ရှမ်း​မြောက်​ အချို့​နေရာ​တွေမှာ မ​နေထိုက်​ဘူးလား၊
(ခ) ​အေ​အေ ဗိုလ်​မှုးကြီး​ကျော်​ဟန်​က စစ်​ဆင်​​ရေးလှုပ်​ရှားတဲ့နယ်​​မြေ​တွေမှာ တပ်​ရဲ့ လှုပ်​ရှားမှု​တွေကို ထိခိုက်​လာရင်​ ၎င်းတို့တပ်​အ​နေနဲ့ ဘယ်​အဖွဲ့ကိုမှ သည်းခံ​နေမှာ မဟုတ်​ဘူး လို့ ​ပြောထားတာရှိတယ်​။ ဒီလို​ အ​ပြောခံရတဲ့အတွက်​ အခြားတပ်​ဖွဲ့ တစ်​ခုခုက ​အေ​အေကို တုံ့ပြန်​​ဆောင်​ရွက်​ဖို့ရန်​ အစီအစဉ်​ရှိမရှိ၊
(ဂ) ဗိုလ်​ချုပ်​မှူးကြီးမင်း​အောင်​လှိုင်​ကို သူရဲ​ကောင်းဘွဲ့​ပေးခဲ့သူများဟာ အခြား လက်​နက်​ကိုင်​တပ်​ အကြီးအကဲတစ်​ဦးဦးကိုလည်းပဲ သူရဲ​ကောင်းဘွဲ့​ပေးဖို့ အစီအစဉ်​ရှိမရှိ၊
(ဃ) ဗိုလ်​ချုပ်​မှူးကြီးမင်း​အောင်​လှိုင်​ နဲ့ ​ကေအိုင်​​အေကို စာလှမ်း​ရေးပြီးတဲ့​နောက်​ အခြားဘယ်​အဖွဲ့​တွေကို လှမ်း​ရေးဦးမှာလဲ၊
(င) ပလက်​ဝမြို့နယ်​ထဲက တချို့ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုရား​ကျောင်းကန်​ အ​ဆောက်​အဦး​တွေဟာ ညဉ့်နက်​​ပိုင်းကျရင်​ အနည်းငယ်​စီ ညစ်​ပတ်​သွားတတ်​လို့ မနက်​ကျရင်​ ​ဆေး​ကြောပစ်​ရတာ​တွေရှိတတ်​တယ်​၊ ဒါ​တွေ မဖြစ်​​အောင်​ ဘယ်​လိုလုပ်​ရမလဲ၊
(စ) ရခိုင်​ပြည်​နယ်​ထဲမှာ ချင်းအမျိုးသား​နေ့ကို ခြိမ့်​ခြိမ့်​သဲ ကျင်းပရင်​ ဘာမှမဖြစ်​​ပေမယ့်​ ပလက်​ဝ ဌာ​နေ ရခိုင်​တိုင်းရင်းသား​တွေက ရခိုင်​ပြည်​နယ်​​နေ့ ကျင်းပရင်​ ဝိုင်းဝန်းပိတ်​ပင်​တားဆီးခံရတတ်​​တော့ – ဒီလိုမျိုး မဖြစ်​ရ​အောင်​ ဘယ်​လိုလုပ်​ရမလဲ။
ဒီ​မေးခွန်း​တွေမှာ အ​ဖြေရှိမရှိ ကျွန်​​တော်​ ကလည်း သိချင်​ပါတယ်​။
ချင်းတိုင်းရင်းသားများအား ချစ်​ခင်​​လေးစားလျက်​ –
၂၀၁၉ နိုဝင်​ဘာလ (၈) ရက်​
မ​နကေ့ ​စောငျ့ဖတျ​​နတေဲ့ သတငျး​တှထေဲမှာ ခငျြးပွညျ​နယျ​ဘကျ​က သတငျးတဈ​ပုဒျ​ကို ဖတျ​ရပါတယျ​။
ထိနျးသိမျးခံ ပလကျ​ဝ NLD အမတျ​အတှကျ​ ခငျြး ဘာသာ​ရေး အဖှဲ့အစညျး​တှကေ KIA ဆီ ​ပေါကျ​နိုငျ​မယျ့​ ခရဈ​ယနျ​ သာသနာ​ရေး လမျး​ကွောငျးက​နေ စာ​ရေးကွမယျ​ တဲ့၊ စာ​အ​ခြော​ရေးထားပွီးပွီတဲ့။
ဟာ . . . ဒီလူ​တှအေ​ပွောငျးအလဲမွနျ​လှခညျြ​လား​ပေါ့​လေ၊ ကြှနျ​​တျော​​တှေးမိပါတယျ​။ ဘာ​ကွောငျ့​ ဒီလို​တှေးမိသလဲ ဆို​တော့ အထိနျး​သိမျးခံ ဦး​ဝှေးတငျး အပါအဝငျ​ ဒီလူ​တှဟော လှနျ​ခဲ့တဲ့ သုံးနှဈ​​ကြျော​က ကြှနျ​​တျော​တို့ကို ​အေ​အလေကျ​က​​နေ ကယျ​ကွပါ ကယျ​ကွပါ ဆိုပွီး ဗိုလျ​ခြုပျ​မှူးကွီးမငျး​အောငျ​လှိုငျ​ နဲ့ ပွညျ​ထဲ​ရေးဝနျ​ကွီးဌာန တို့ဆီကို စာလှမျး​ရေးထားကွတာမို့လိုပါပဲ။ ဒီအလုပျ​​တှကေို ခမီးလူငယျ​​ခေါငျး​ဆောငျ​ ​ဝှေးတငျး (Huay Ting – လကျ​ရှိ အထိနျးသိမျးခံ​နရေသူ NLD အမတျ​) ကိုယျ​တိုငျ​ ဦး​ဆောငျ​ပွီး လုပျ​​နခေဲ့ကွတာ ဖွဈ​ပါတယျ​။
ဒီအ​ကွောငျးကို MID News (Media Initiatives for Democracy) သတငျးစာမကျြ​နှာမှာ ၂၀၁၆ ဇနျနဝါရီလ (၁၉) ရကျ​​နကေ့ ​ရေးထားတဲ့ သတငျးတဈ​ပုဒျ​မှာ ဒီလို ​ဖျော​ပွထားပါတယျ​။ “. . . (၂၀၁၆) ဇနျနဝါရီ ၇ ရကျနတှေ့ငျ တပျမတျော ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျထံ တငျပွထားပွီး၊ ပွညျထဲရေးဝနျကွီးဌာန၊ ရခိုငျဝနျကွီးခြုပျ၊ ခငျြးဝနျကွီးခြုပျတို့ထံ တငျပွထားကွောငျး ခူမီးလူငယျမြားအသငျးအတှငျးရေးမှူး ဝှတေ့ငျးက ပွောသညျ။”
အဲသညျ​တုနျးက ခူမီးလူငယျ​အဖှဲ့တို့ စသညျ့​ဖွငျ့​ ပူးတှဲထုတျ​ပွနျ​ကွတဲ့ ထုတျ​ပွနျ​ခကျြ​မှာ အခကျြ​​လေးငါး​ခွောကျ​ခကျြ​ပါရာမှာ အလှယျ​မှတျ​မိသ​လောကျ​ – အစိုးရ နဲ့ တပျ​မ​တျော​ကို ​ကြေးဇူးတငျ​တယျ​၊ NCA သ​ဘောတူညီခကျြ​​တှအေရ ပလကျ​ဝအပါအဝငျ​ ခငျြးပွညျ​နယျ​မှာ အစိုးရတပျ​ နဲ့ CNF ပူးတှဲ လုံခွုံ​ရေး​ဆောငျ​ရှကျ​ဖို့ (ဆိုလိုတာ ​အေ​အေ ကို ပလကျ​ဝမှာ မရှိ​စဖေို့)၊ ​ပလကျ​ဝမွို့နယျ​အတှငျး ​အေ​အရေဲ့ ​ပွောဆိုစညျးရုံး​နမှေု​တှကေို ကနျ့​ကှကျ​တယျ​ စသညျ​ဖွငျ့​ ပါ,ပါတယျ​။
ဦး​ဝှတေ့ငျးဟာ ​ခူမီး နဲ့ ရခိုငျ​​တှအေကွား ​သှေးခှဲတဲ့ လှုံ့​ဆျော​​ရေးသားခကျြ​​တှကေို ​ရေးတဲ့ ​ဖဘေု့တျ​ စာမကျြ​နှာ အခြို့မှာ admin အဖွဈ​ပါဝငျ​​နတေယျ​ လို့ ကြှနျ​​တျော့​ကို ​ပွော​ပွော​နကွေတာ ကွားဖူးတယျ​။ ဒါ​ပမေဲ့ ဒီအခကျြ​ကို သကျ​​သေ သာဓက ခိုငျ​လုံမှုမရှိဘူး လို့ပဲ သ​ဘောထား လိုကျ​လို့ရပါတယျ​။
တကယျ​လို့မြား ကခငျြ​ပွညျ​နယျ​ထဲက မိတျ​​ဆှမြေားဆီကို လူကွီးမငျးတို့တ​တှေ စာလှမျး​ရေးတဲ့အခါ ဖတျ​ရှုရသူ​တှေ သိခငျြ​စိတျ​​ပေါကျ​တဲ့ ​မေးခှနျး​လေး​တှေ ​ပျေါ​ပေါကျ​လာနိုငျ​တာမို့ တခြို့​မေးခှနျး​လေး​တှကေို ​ဖွဆေိုနိုငျ​ဖို့ရာ စာလှမျး​ရေးတဲ့သူ​တှကေ ကွိုတငျ​ ပွငျ​ဆငျ​ထားသငျ့​တယျ​။
(က) ရခိုငျ​​တှေ​နတေဲ့ ပလကျ​ဝမှာ ​အေ​အေ မ​နရေဘူး ဆိုရငျ​၊ ​ကအေိုငျ​​အဟော ကခငျြ​​တှရှေိ​နတေဲ့ ရှမျး​မွောကျ​ အခြို့​နရော​တှမှော မ​နထေိုကျ​ဘူးလား၊
(ခ) ​အေ​အေ ဗိုလျ​မှုးကွီး​ကြျော​ဟနျ​က စဈ​ဆငျ​​ရေးလှုပျ​ရှားတဲ့နယျ​​မွေ​တှမှော တပျ​ရဲ့ လှုပျ​ရှားမှု​တှကေို ထိခိုကျ​လာရငျ​ ၎င်းငျးတို့တပျ​အ​နနေဲ့ ဘယျ​အဖှဲ့ကိုမှ သညျးခံ​နမှော မဟုတျ​ဘူး လို့ ​ပွောထားတာရှိတယျ​။ ဒီလို​ အ​ပွောခံရတဲ့အတှကျ​ အခွားတပျ​ဖှဲ့ တဈ​ခုခုက ​အေ​အကေို တုံ့ပွနျ​​ဆောငျ​ရှကျ​ဖို့ရနျ​ အစီအစဉျ​ရှိမရှိ၊
(ဂ) ဗိုလျ​ခြုပျ​မှူးကွီးမငျး​အောငျ​လှိုငျ​ကို သူရဲ​ကောငျးဘှဲ့​ပေးခဲ့သူမြားဟာ အခွား လကျ​နကျ​ကိုငျ​တပျ​ အကွီးအကဲတဈ​ဦးဦးကိုလညျးပဲ သူရဲ​ကောငျးဘှဲ့​ပေးဖို့ အစီအစဉျ​ရှိမရှိ၊
(ဃ) ဗိုလျ​ခြုပျ​မှူးကွီးမငျး​အောငျ​လှိုငျ​ နဲ့ ​ကအေိုငျ​​အကေို စာလှမျး​ရေးပွီးတဲ့​နောကျ​ အခွားဘယျ​အဖှဲ့​တှကေို လှမျး​ရေးဦးမှာလဲ၊
(င) ပလကျ​ဝမွို့နယျ​ထဲက တခြို့ ဗုဒ်ဓဘာသာ ဘုရား​ကြောငျးကနျ​ အ​ဆောကျ​အဦး​တှဟော ညဉျ့နကျ​​ပိုငျးကရြငျ​ အနညျးငယျ​စီ ညဈ​ပတျ​သှားတတျ​လို့ မနကျ​ကရြငျ​ ​ဆေး​ကွောပဈ​ရတာ​တှရှေိတတျ​တယျ​၊ ဒါ​တှေ မဖွဈ​​အောငျ​ ဘယျ​လိုလုပျ​ရမလဲ၊
(စ) ရခိုငျ​ပွညျ​နယျ​ထဲမှာ ခငျြးအမြိုးသား​နကေို့ ခွိမျ့​ခွိမျ့​သဲ ကငျြးပရငျ​ ဘာမှမဖွဈ​​ပမေယျ့​ ပလကျ​ဝ ဌာ​နေ ရခိုငျ​တိုငျးရငျးသား​တှကေ ရခိုငျ​ပွညျ​နယျ​​နေ့ ကငျြးပရငျ​ ဝိုငျးဝနျးပိတျ​ပငျ​တားဆီးခံရတတျ​​တော့ – ဒီလိုမြိုး မဖွဈ​ရ​အောငျ​ ဘယျ​လိုလုပျ​ရမလဲ။
ဒီ​မေးခှနျး​တှမှော အ​ဖွရှေိမရှိ ကြှနျ​​တျော​ ကလညျး သိခငျြ​ပါတယျ​။
ခငျြးတိုငျးရငျးသားမြားအား ခဈြ​ခငျ​​လေးစားလကျြ​ –
၂၀၁၉ နိုဝငျ​ဘာလ (၈) ရကျ​
Previous အိန်ဒိယ၊ ကုလားတနျ​ ပ​ရောဂကျြ​၊ NON-STATE ACTOR ​အေ​အေ
Next မွနျ​မာအစိုးရအား အသိဉာဏျ​မမဲ့​စလေို